Mara ọkwa Corning ozodimgba iko 5 na mma-eguzogide | Akụkọ akụrụngwa
Corning kwupụtara Gorilla Glass 5 na mmụba ike abụọ
Ogbenye na igwe anyị daa kwa abụọ na atọ n'elu ebe siri ike nakwa na e nwere ọbụna ndị nwere ike ịlanarị na-ewere naanị obere obere ọkọ. Ekwesịrị ịme ka njedebe ndị a site na akpụrụ akpụ n'ihi nnukwu mmekpa ahụ ha na-ata ahụhụ yana na ha nwere ikike ịpụ apụ n'ụzọ dị mma maka mgbapụ na ọdịda ndị ahụ. Na ha nwere ike ime ka ọ pụta na ndụ anyị ji, na akụkụ ụfọdụ, na Corning Gorilla Glass.
Ha bụkwa Ngwaọrụ 4.500 ndị e kesara Gorilla Glass kesara ụwa niile dị ka Corning kwuru n'onwe ya mgbe ọ kwupụtara ọkwa nke ise nke iko nchedo ya bụ nke a maara ugbu a dịka Gorilla Glass 5. Nkwupụta nke na-etinye anyị n'ihu mmezi pụtara ìhè na nguzogide na ikike iji nwee ike ịlanarị ndị ahụ dara.
Corning na-azọrọ na ahaziri Gorilla Glass 5 ka ọ nwee ike lanarị pasent 80 nke oge mgbe ọ na-ada ihu na ihu site na ịdị elu nke mita 1,6 n'elu ebe siri ike. Yabụ ndị ọrụ ahụ nọ na 85% dobe pasent opekata mpe kwa afọ na 55% ndị tụbara ekwentị ha ruo ugboro atọ ma ọ bụ karịa, agaghị ele ha anya site n'ịhụ otu ọdụ ọdụ gị dara.
Ule emere na ulo nyocha ya gosi na Gorilla Glass 5 bu 1,8 ugboro ike karịa Gorilla Glass 4. Banyere ọkọ, Gorilla Glass 5 dị n'otu dị na nke gara aga, yabụ kpachara anya mgbe ị nwere otu n'ime ọdụ ndị ahụ na-amalite inwe ụdị a na njedebe nke afọ a, ebe ọ bụ na oge ọ na-arụpụta, N'ihi ya, ọ gaghị enwe ike ịhụ na nso nso Galaxy Note 7.
Ike sikwuoro anyị ike na nke ahụ gaa n'ihu na-akwado ndị ogbenye na-ada ma daa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Corning kwupụtara Gorilla Glass 5 na mmụba ike abụọ
Moto G nke Amazon agaghị enwe bootloader agbachi dika Motorola si kwuo
Samsung Galaxy Tab S3 nwere ike ịbịaru nso karịa ka anyị chere